MediaNP, Author at Media Nepal - Page 30 of 640
के प्रेमीकाको ‘चक्कर’ छ छैन थाहा पाउन मन छ ? यता हेर्नुहोस् – हस्तरेखा बिज्ञान
January 25, 2018	Comments Off on के प्रेमीकाको ‘चक्कर’ छ छैन थाहा पाउन मन छ ? यता हेर्नुहोस् – हस्तरेखा बिज्ञान
तपाई हस्तरेखा विज्ञान र ज्योतिस विज्ञानमा कत्तिको बिश्वास गर्नुहुन्छ ? हातका रेखाले धेरै कुरा बताउँछ । कुनै मानिसको कहिले बिहे हुन्छ, कति बच्चा हुन्छन्, जागिर कस्तो हुन्छ ? यी सबै कुराहरु हस्तरेखामा हुन्छ । बस्, त्यसलाई ठीकसँग हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ । कयौंपटक केटाहरु आफ्नो प्रेमिकाप्रति शंका गर्दछन्, पहिला उनको कसैसँग सम्बन्ध थियो कि ? यस्तो सोचले सम्बन्धमा खटपट पनि पैदा …
जव रेस्लिङ्गको रिङ्गमा उत्रीईन् यी हट अभिनेत्री: रेस्लरले गरे यस्तो अश्लिल हर्कत (भिडियोसहित )
January 25, 2018	Comments Off on जव रेस्लिङ्गको रिङ्गमा उत्रीईन् यी हट अभिनेत्री: रेस्लरले गरे यस्तो अश्लिल हर्कत (भिडियोसहित )
चर्चित पोर्न स्टार (अश्लिल चलचित्रकी अभिनेत्री) मिया खलीफाले आजभोली रेसलिंगको मज्जा लिईरहेकी छन्। खलिफालाई एक रेसलरले रिङ्गमै निमन्त्रणा गरेपछि उनी डब्लू डब्लू ई रेस्लिङ्गको रिङ्ग मै पुगेकी हुन्। जब उनी रिङ्गमा उत्रीईन् त्यहाँ दर्शकहरुको ठूलो हुटिङ्ग आएको थियो। अन्तराष्ट्रिय मीडिया रिपोर्ट्सका अनुसार रिङ्गमा रेसलरले मियाको साथ अश्लील हरकत गर्न लागेका थिए । तब मियाका बडीगार्डले उक्त रेसलरलाई रामधुलाई हानेका थिए। …
January 25, 2018	Comments Off on विश्वका ५ महाकन्जुस् अरबपति: जसका अनौठा किस्सा सुनेर पर्नु हुनेछ तपाई आश्चर्यचकित !
ब मानिससँग पैसा हुन्छ उसको जिउने तरिका पनि अलिक भिन्दै खालको हुन्छ। महँगा महँगा गाडीहरु र ब्रान्डेड कपडा धनीमानीको पहिचान नै हो। तर आज हामीसँग यस्ता धनाड्य व्यक्तिहरुको बारेमा बताउन गैरहेका छौँ, जो आफ्नो कन्जुसी व्यवहारको कारण चर्चित छन्। भनिन्छ नि मानिस जतिसुकै धनि किन नहोस् उसले आफ्नो कन्जुसी व्यवहार कतै न कतै देखिई हाल्छ। आज हामीले यस्ता धनि व्यक्तिहरुको …
January 25, 2018	Comments Off on स्मार्ट बुहारी ,सासुको प्रिय बन्न चाहनुहुन्छ ? यी १० टिप्स अपनाउनुस
के म मेरो पति र परिवारलाई खुसी राख्न सक्छु ? अक्सर नव-दुलहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो। र, यो स्वभाविक पनि हो । जब बुहारी बनेर अर्को घरमा प्रवेश गरिन्छ, सबै कुरा नौला हुन्छन्। परिवारका सदस्य, त्यहाँको वस्तुस्थिती, परिवारको रहनसहन, बानी व्यवहार, चालचलन भिन्न हुनसक्छ। अर्थात आफु हुर्किएको पारिवारिक वातावरणसँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक नव-दुलहीले आफुलाई फरक …
January 25, 2018	Comments Off on मङ्गला र पिङ्गला दशाको बारेमा अनविज्ञ हुनुहुन्छ ? आउनुस थाहा पाउनुस यसको प्रभाब र बच्ने उपाय
आज हामी ग्रहहरुमध्ये सबै भन्दा छिटो हिँड्ने ग्रह चन्द्रमाको श्रीमती मंगलाको बारेमा चर्चा गर्छौँ । ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डली वा चिना हेर्दा दशाको बारेमा विचार गरिन्छ । अहिलेको समय कस्तो छ वा आउने समयमा राम्रो नराम्रो के हन्छ जस्ता कुराहरुलाई दशा हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ । दशाहरु धेरै प्रकारका भए पनि कलियुगमा योगिनी दशालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । योगिनीहरुको आधारमा हेरेको दशा …
January 24, 2018	Comments Off on श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले राती साढे २ बजे पलङमुनि बाट आवाज आएपछि हेर्दा…
श्रीमतीसँग मस्त सुतिरहेका श्रीमान् राती साढे २ बजे पलङमुनिबाट आवाज आएपछि ब्यूँझिए । उनले पलङमुनि के रहेछ भनेर हेर्दा त्यहाँ उनकी श्रीमतीका प्रेमी लुकिरहेको भेट्टाए । बेडरुममा श्रीमतीका प्रेमी भेट्टाएपछि उनी रिसले आगो भए । उनले प्रेमीलाई त्यहीँ मरणासन्न हुनेगरी कुटे । हल्लाखल्ला भएपछि गाउँलेहरु जम्मा भए । ती व्यक्तिले श्रीमती र उनका प्रेमीलाई एउटा कोठामा थुनिदिए ।भारतको बिहार कटिहार …